May 2021 – Kavrepati
May 31, 2021	समाचार 0
काठमाडौ । नेकपा एमाले बाँकेका नेता डम्बर थापाको कोरोनाका कारण निधन भएको छ । लामो समय नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा उपचारार्थ रहेका उनको सोमवार निधन भएको हो । एमाले, बाँकेका सचिवालय सदस्य एवं डुडुवा गाउँ कमिटीका इन्चार्ज समेत रहेका थापाको सोमबार दिउँसो सवा दुई बजे निधन भएको एमालेले जनाएको छ । …
नेपालमा विगत २४ घण्टामा ४,७६२ जना कोभिड बिरामी थपिएका छन्। त्यस्तै सो अवधिमा थप ११४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमवार जनाएको छ। कुल १७,४८० नमुना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको हो। तीमध्ये २,४२५ एन्टिजन परीक्षण हो जसबाट ५८४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। …
ग’र्भावस्थाको मज्जा लिदै अभिनेत्री गरिमा पन्त, ७ तस्विरमा हेर्नुहोस !
May 31, 2021	मनोरंजन 0
काठमान्डौ : नेपाली सिनेमा क्षेत्रकी सालिन तथा सुन्दर अभिनेत्री गरिमा पन्त यतिबेला ग’र्भावस्थाको मज्जा लिईरहेको छिन् । यतिबेला नेपालि सिनेमा क्षेत्रमा अभिनेत्रीहरु ग’र्भवती हुने लहर चलेको छ । को’रोनाको कारण नेपाली सिनेमा क्षेत्र ठप्प छ। अहिलेको फुर्सदको समयमा अभिनेत्रीहरु आमा बन्ने लहर चलेको देख्न सकिन्छ ।केही दिन पहिले अभिनेत्री प्रियंका …
कृष्णराज तिमल्सिना-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही लोकप्रियता कमाउने खालका विषय पनि समेटेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो स्नातक उत्तीर्ण युवाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने विषय । देशमा शैक्षिक बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला युवा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका …
उनको विवाह भएको ८ वर्ष भयो । उनलाई विवाह गर्ने मन पनि थिएन । जो संग विवाह भयो उनको पहिला नै विवाह भइसकेको रहेछ । सानो छोराले मलाई केही खान मन लागेको छ बुवा पैसा दिनुन भन्दा पनि बुवाको छोरा प्रति मन पलाएन । यस्तो श्रीमानसंग म बस्न सक्दिन म …
काठमाडौं । महामारीको समयमा विश्वास नलाग्ने घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अहिले सामाजिक सजालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको छ । महामारीमा ज्या न गु मा एकाहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ । तर यस्ता पनि आफन्त हुन्छन् जसले आफ्नो कर्तब्य पनि पालना गर्दैनन् । एक जना ब्यक्तिले …
मोवाइलमा कुरा गर्दै उनले भनिन, म तपाईको सेल्टरमा बस्न आउन लागेकी दिदी, कसरी आउने ? मैले सोधें, कहाँबाट आउन लागेको ? ‘जल्ला भुक्तोबाट ।’ हाम्रो सेल्टर कोरियाको पूर्वोत्तरतर्फको एक शहर सुवनमा छ । तर, उनी दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रको जल्ला भुक्तो भन्ने ठाउँबाट आउन लागेको सुनेर मेरो मुखबाट अचा`नक निस्कियो, ओहो ! …
काठमाडौं । वि.सं. २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वहाराको राजनीतिक सिद्धान्त बोकेर हिडेका प्रचण्डको सम्पति एक कट्ठा जमिन र तीन तोला सुनमात्र थियो । सुरुदेखि नै माओवादी पार्टीलाई सर्वहाराको आवाज भन्ने गरिएको छ । त्यसै पार्टीको प्रमुख भएपनि राजर्शी जीवनशैलीमा देखिने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पति विवरण …